ရာထူးနှစ်ဆင့် ပိုမြင့်သွားတဲ့သမီးကို ဂုဏ်ယူစွာနဲ့အလေးပြုခဲ့တဲ့ ရဲအရာရှိဖခင်ကြီး - Reader Choice
မိဘဆိုတာ သားသမီးအမြင့်ရောက်လေ ဝမ်းသာအားရရှိလေ၊ ပျော်ရွှင်လေ ဖြစ်ပါတယ်။ သားသမီးကို ငယ်စဉ်ကတည်းက ဂုဏ်ယူရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာ ကျင်လည်အသက်မွေးစေချင်ကြတာ မိဘတိုင်းရဲ့ ဗီဇဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ငယ်စဉ်ကတည်းက ကိုယ့်သားသမီးကို ဆရာဝန်ကြီးလုပ်မှာလားအင်ဂျင်နီယာကြီးလုပ်မှာလားဆိုပြီး လမ်းကြောင်းပြ မေးခွန်းလေးတွေနဲ့ ဆွယ်ကြတာပါ။ အခုလည်း အိန္ဒိယက ရဲအရာရှိဖခင်တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ထက် ရာထူးနှစ်ဆင့်ပိုမြင့်သွားတဲ့ သမီးကို
လေးလေးစားစား ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ အလေးပြုနှုတ်ဆက်ခဲ့ရာ၊ အဆိုပါဓာတ်ပုံဟာ လူမှုကွန်ရက်မှာ နာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်။ သမီးဖြစ်သူရဲ့အမည်ကတော့ Yendluru Jessy Prashanthi ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ SP ဆိုတဲ့ရာထူးနဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာပါ။
SP ဆိုတဲ့ရာထူးဟာ Deputy Superintendent of Police ရာထူးရဲ့အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖခင်ကတော့ Deputy Superintendent of Police (Dy. SP)ရာထူးနဲ့ သမီးထက် နှစ်ဆင့်နိမ့်တဲ့အနေအထားမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဖြစ်ပြီး၊
အမည်ကတော့ Y Shyam Sunder ဖြစ်ပါတယ်။ သမီးဖြစ်သူက ကိုယ့်ထက် ရာထူးအဆင့်မြင့်သွားတာကို သူ ဂုဏ်ယူနေတာပါ။ သူတို့သားအဖနှစ်ယောက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ(၄)ရက် တနင်္လာနေ့က Tirupati မှာကျင်းပတဲ့ Andhra Pradesh Police Duty Meet တွေ့ဆုံပွဲမှာ ပြန်ဆုံကြတာပါ။
သမီး Prashanthi ကတော့ Andhra Pradesh ပြည်နယ်က Guntur ခရိုင်မှာ တာဝန်ကျသူဖြစ်ပြီး၊ သူတို့တစ်တွေ အခုတွေ့ဆုံပွဲမှာမှ ပြန်ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဖခင် Shyamက ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ လာရောက်အလေးပြုတော့ ရဲအရာရှိတစ်ဦးနဲ့ စကားပြောနေတဲ့ သမီးဖြစ်သူလည်း ချက်ချင်း ပြန်အလေးပြုပြီး
”ဖေဖေ ဘာလုပ်တာတုန်း “ဆိုပြီး(အလေးပြုတာကို မခံယူဝံ့တဲ့သဘောနဲ့) ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို ရဲအရာရှိတစ်ဦးက မှတ်တမ်းတင်ထားခဲ့တာပါ။ Tirupati (Urban) မှာ SP အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ A Ramesh Reddyi က ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြီး “ဒါမျိုး ရုပ်ရှင်ထဲမှာ တွေ့ဖူးပါတယ်
အပြင်မှာတော့ သိပ်မတွေ့ဖူးဘူး ကျွန်တော်ကတော့ သူတို့သားအဖနှစ်ယောက်ကို ကြည့်ပြီး ပျော်နေမိတယ် တူညီဝတ်စုံဝတ်ဆင်ပြီး လမ်းကြောင်းတူ လျှောက်လှမ်းနေကြတာလေ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ထက်မြတ်လွန်းတဲ့ Prashanthi အတွက် ဖခင်လိုပဲ ကျွန်တော်လည်း ဂုဏ်ယူနေမိတယ် “လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ခရက်ဒစ် လင်းဇော်ကို
မိဘဆိုတာ သားသမီးအမွငျ့ရောကျလေ ဝမျးသာအားရရှိလေ၊ ပြျောရှငျလေ ဖွဈပါတယျ။ သားသမီးကို ငယျစဉျကတညျးက ဂုဏျယူရတဲ့ လုပျငနျးခှငျတှမှော ကငျြလညျအသကျမှေးစခေငျြကွတာ မိဘတိုငျးရဲ့ ဗီဇဖွဈပါလိမျ့မယျ။
ဒါကွောငျ့လညျး ငယျစဉျကတညျးက ကိုယျ့သားသမီးကို ဆရာဝနျကွီးလုပျမှာလားအငျဂငျြနီယာကွီးလုပျမှာလားဆိုပွီး လမျးကွောငျးပွ မေးခှနျးလေးတှနေဲ့ ဆှယျကွတာပါ။ အခုလညျး အိန်ဒိယက ရဲအရာရှိဖခငျတဈယောကျဟာ ကိုယျ့ထကျ ရာထူးနှဈဆငျ့ပိုမွငျ့သှားတဲ့ သမီးကို
လေးလေးစားစား ဝမျးမွောကျဝမျးသာ အလေးပွုနှုတျဆကျခဲ့ရာ၊ အဆိုပါဓာတျပုံဟာ လူမှုကှနျရကျမှာ နာမညျကွီးသှားခဲ့ပါတယျ။ သမီးဖွဈသူရဲ့အမညျကတော့ Yendluru Jessy Prashanthi ဖွဈပါတယျ။ သူမကတော့ SP ဆိုတဲ့ရာထူးနဲ့ တာဝနျထမျးဆောငျနတောပါ။
SP ဆိုတဲ့ရာထူးဟာ Deputy Superintendent of Police ရာထူးရဲ့အတိုကောကျဖွဈပါတယျ။ ဖခငျကတော့ Deputy Superintendent of Police (Dy. SP)ရာထူးနဲ့ သမီးထကျ နှဈဆငျ့နိမျ့တဲ့အနအေထားမှာတာဝနျထမျးဆောငျနသေူဖွဈပွီး၊
အမညျကတော့ Y Shyam Sunder ဖွဈပါတယျ။ သမီးဖွဈသူက ကိုယျ့ထကျ ရာထူးအဆငျ့မွငျ့သှားတာကို သူ ဂုဏျယူနတောပါ။ သူတို့သားအဖနှဈယောကျဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဇနျနဝါရီ(၄)ရကျ တနင်ျလာနကေ့ Tirupati မှာကငျြးပတဲ့ Andhra Pradesh Police Duty Meet တှဆေုံ့ပှဲမှာ ပွနျဆုံကွတာပါ။
သမီး Prashanthi ကတော့ Andhra Pradesh ပွညျနယျက Guntur ခရိုငျမှာ တာဝနျကသြူဖွဈပွီး၊ သူတို့တဈတှေ အခုတှဆေုံ့ပှဲမှာမှ ပွနျဆုံခဲ့တာဖွဈပွီး ဖခငျ Shyamက ဂုဏျယူစှာနဲ့ လာရောကျအလေးပွုတော့ ရဲအရာရှိတဈဦးနဲ့ စကားပွောနတေဲ့ သမီးဖွဈသူလညျး ခကျြခငျြး ပွနျအလေးပွုပွီး
”ဖဖေေ ဘာလုပျတာတုနျး “ဆိုပွီး(အလေးပွုတာကို မခံယူဝံ့တဲ့သဘောနဲ့) ပွောလိုကျပါတယျ။ ဒီအဖွဈအပကျြကို ရဲအရာရှိတဈဦးက မှတျတမျးတငျထားခဲ့တာပါ။ Tirupati (Urban) မှာ SP အဖွဈ တာဝနျထမျးဆောငျနတေဲ့ A Ramesh Reddyi က ဒီဖွဈစဉျကိုကွညျ့ပွီး “ဒါမြိုး ရုပျရှငျထဲမှာ တှဖေူ့းပါတယျ
အပွငျမှာတော့ သိပျမတှဖေူ့းဘူး ကြှနျတျောကတော့ သူတို့သားအဖနှဈယောကျကို ကွညျ့ပွီး ပြျောနမေိတယျ တူညီဝတျစုံဝတျဆငျပွီး လမျးကွောငျးတူ လြှောကျလှမျးနကွေတာလေ ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ ထကျမွတျလှနျးတဲ့ Prashanthi အတှကျ ဖခငျလိုပဲ ကြှနျတျောလညျး ဂုဏျယူနမေိတယျ “လို့ ပွောခဲ့ပါတယျ။ ခရကျဒဈ လငျးဇျောကို